~ ဏီလင်းညို ~: အဆုံး=အစ
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 11:49 PM
အနုပညာဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်မကဘူး..
အယ်... ရှက်နေတာလား အန်တီညိုရယ်...
ဟောင်းနေပေမယ့် ကောင်းနေဆဲပါ အန်တီညိုရယ်..
ဏီလင်းက လက်ရေးလှတယ်တော့ ... စာလေးကလဲ နုဖတ်နေတာပဲ ရှက်နဲ့နော် ငယ်လက်ရာလေး ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ :)
ငယ်လက်ရာဆိုတော့ ခံစားချက်တွေ ပြည့်နေတဲ့ အချိန်မျိုးပေါ့.. တကယ့်ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကောင်း ဖြစ်ခဲ့နိုင်တယ်နော် ခိခိ
ကောင်မလေးတွေကို နည်းလမ်းကောင်း ပေးနေတာ ဖြစ်မယ်...
ငယ်မူငယ်သွေးမို့ အရေးအသားနုနုလေးနဲ့ ဖတ်ရတာ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးပေါ့...
ဆြာဏီ့ လက်ရေးက ရှယ်ပဲနော်..။ကောင်းပါတယ်ဗျ
ကဗျာလေးနဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်လေးနေဲ့ တွဲခေါ်သွားပုံလေး လှတယ်..အဲဒါ ကိုဏီ့ကိုယ်တွေ့လားဗျ
ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ။ ချစ်တဲ့သူတိုင်း ဆုံဆည်းကြစေချင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကိုလင်းညိုရဲ့ အဖြေပေးပုံကြီးကလဲ မသက်သာလိုက်တား)
စကားမစပ် ... ကိုလင်းညိုက အချစ်လိုင်းကို တဖြည်းဖြည်းပိုရောက်နေပြီးD
နတ်သာမီး၊ မိုးယံ>>> ကျေးဇူး...ဒါပေမယ့် ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ......တကယ်ရှက်သလိုပဲရယ်ဗျ.......း)
မမေ>>> ခုလက်ရေးက ပိုတောင်ဆိုးလာသလိုပဲ။ စောင်းစောင်းကြီးရယ်ဗျ.....း))
မချော>>> ကိုယ်တွေ့ဟုတ်ဘူးရယ်ဗျ။ သူများရဲ့ဇာတ်လမ်းကြီး.......း))
ကိုမောင်လေး၊ ညီလေးမေပယ်လ်>>> အစစ်ပဲ။ သူတို့အဆုံးမှာပျော်သွားကြရတယ်ထင်တယ်......း))
ညီမလေး>>> ကိုလင်းညိုလည်း...အချစ်အကြောင်းရေးရရင် လက်က သွက်နေတတ်တယ်....၊ အခြားသောစာတွေ ရေးနေရရင် အစွန်းရောက်သွားမှာ စိုးနေရလို့ ကိုယ့်လက်ကို ကိုယ်ပြန်ထိန်းနေရတာနဲ့ပဲလေ....:P
ပါးရိုက်ပြီး ပေးတယ် .. ;))
ကောင်မလေးရယ် .. :D
ကိုအာတန်ကြီးက နုရွနေတော့ အရိုက်ခံရတော့မှာပေါ့..
ကိုယ်က ကိုယ်ကြီုက်ရင် လာစမ်းဆိုပြီး..ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အပီကိုင်မှ တော်ကာကြတာ..
ရေးထားတဲ့(ပို့)စ်လေးက စာသားလေးတွေက နူးညံ့နေတာပဲ. အဖွဲ့အနွဲ့ကလဲကောင်းပ..
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ဘကျောက်ပေးတဲ့နည်းလေးလဲ သုံးသင့်ရင် သုံးပေါ့ ကိုဏီး ရယ် နော့်...
ဖတ်သွားတယ်နော် အခုမှ ရောက်ဖြစ်တော့တယ်
2004 တော်တော်ကြာပီပဲနော် သူများတွေရေးထားတာအားကျစရာကြီး ရေးထားတာ မျက်လုံးထဲတောင်ပေါ်အောင်ရေးတတ်လိုက်တာ
ဦးဏီနော် သင်ပေးနေတယ် ဟဟဟ
အဲလိုပဲရည်းစားစကားလာပြောရင် ပါးရိုက်ပြီး အဖြေပေးလိုက်မယ်နော် အဲဒါ ဦးဏီ ဝတ္ထုထဲကအတိုင်းလို့ ပြန်ပြောလိုက်မယ် ခစ်ခစ်
အသက်ကြိးပေမယ့်မပျက်စီးသေးပါဘူးကွယ် ဟက်ဟက် အော် ဇာတ်လမ်းကို ပြောပါတယ် ဟဲဟဲ
ကိုဏီး ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ အဆုံးနားရောက်တော့ ပါးတွေတောင် ယားချင်လာတယ် ဟိဟိ
အေးလေ ဒီလောက် တုံဏိဘာဝေ လုပ်နေမှတော့ ရိုက်သင့်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငယ်ငယ်ထဲက ချစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ပေးမလွဲတာပဲ ကျေနပ်လှပြီ။
မလေး>>> ဟုတ်တယ်....။ အစစ်ပဲ.....း))
ဆွေလေးမွန်>>> ကျေးဇူးဗျာ....။ ကိုကြီးကျောက်လို လုပ်ရဲပေါင်ဗျာ.....ဟား.ဟား.
noblemoe>>> မိုးရေ့....မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
၀က်ဝံလေး>>> လျှောက်မလုပ်နဲ့နော်...ညီမလေး....။ ကိုဏီနဲ့ဆိုင်ဝူး...ဒါပဲ.......ဟိဟိ
လင်းခေတ်ဒီနို>>> ပါးယားတာ...ရေမှန်မှန်မချိုးလို့နေမည်....ဗညားရ.....။ အဟမ်းးးးး
blackroze>>> ကျေးဇူးညီမလေး...။ အားမှသာ လာဖတ်ပါဗျား.....း)
မြစ်ကျိုးအင်း>>> သူက အားပေးအားမြှောက်........အဟမ်းးးးး
ဟောင်းပေမယ့် မဖတ်ရသေးသမျှတော့ အသစ်ပါဗျာ။ ကိုဏီးက အရင်ထဲကကို လက်စလက်နရှိတယ်ဗျာ။
ကိုဏီ...အရင်တုန်းက ရေးခဲ့တာပေမဲ့ မနေ့တနေ့ကရေးဖွဲ့ထားသလိုဘဲကောင်းတယ်...ကောင်လေးအချစ်ကိုဖွဲ့ဆိုထားတာ ခိုက်သွားပြီ်...
အင်းးးးး အသဲတယားယားနဲ့ဖတ်ခဲ့ရတာ
ဘယ့်နှယ်နော် ... ကောင်လေးချစ်တတ်တာများ။
ကောင်မလေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးလဲ သဘောကျမိရဲ့။
." HAPPY MERRY CHRISTMAS " ပါ။